Munamato wembwa inorwara. ? Namata nekutenda uye batsira shamwari yako kupora.
Munamato wembwa inorwara. Idzi imbwa shamwari dzemunhu dzepedyo, pasina mubvunzo. Vanounza mufaro uye kuseka kwakanaka kumhuri. Asi zvinosuruvarisa, kwete kuti zvese maruva. Sezvinhu zvipenyu, ivo vanorwarawo, vanoda kutarisirwa uye vanokonzera kunetseka.
Munamato wembwa inorwara unodzikamisa iwe nemhuri yako mune ino nguva yekusuwa. Imbwa yakowo chisikwa chaMwari uye saka uchave nekukomborerwa naiye kana iwe uchiikumbira nekutenda uye kuvimba.
Heano mimwe minamato yekubatsira shamwari yako diki kuti isanzwa kurwadziwa uye kupora nekukurumidza.
1 Munamato wembwa inorwara
2 Munamato wekuporesa mhuka inorwara
3 Pet Kudzivirira Munamato
4 Munamato wekuporesa mhuka
5 Kunyengeterera imbwa inorwara inoporesa
6 Munamato weSanta Francis weAssisi wemhuka dzinorwara.
Munamato wembwa inorwara
“Baba Vekudenga, ndapota tibatsireiwo munguva yedu yekushayiwa. Makatiita vabati ve (zita raPet). Kana kuri kuda kwako, ndapota dzorera hutano hwako nesimba.
Ini ndinonamatirawo dzimwe mhuka dzinoshaiwa. Dai vabatwa nehanya nekuremekedzwa izvo izvo zvese zvakasikwa zvakafanirwa.
Makarumbidzwa imi, Ishe Mwari, zita renyu rinoyera kubva narinhi narinhi. Ameni
“Tenzi anodikanwa, peturu yangu inodikanwa uye mumwe wangu (zita) akarwara. Ndiri kukureverera, ndiri kukumbira rubatsiro rwako panguva ino yekushaiwa.
Ini ndinobvunza ndichizvininipisa kuti ive yakanaka uye gwara remhuka yangu sezvayakaita nevana vake vese.
Dai kukomborera kwako kuporese mudiwa wangu uye kukupa mamwe akawanda mazuva akanaka atinogona kugara pamwe.
Dai isu tikomborerwe uye kupora seimwe chikamu chenyu rudo. Ameni!
Munamato wekuporesa mhuka inorwara
«Mwari Samasimba, uyo akandipa chipo chekuziva muzvisikwa zvese zvepasi rose kuratidzwa kwechiedza cherudo Rwako; iyo yawakandipa, muranda anozvininipisa wekunaka kwako kusingaperi, chengetedzo uye dziviriro yezvisikwa zvepasi; ndibvumire, kuburikidza nemaoko angu asina kukwana uye nepfungwa dzangu dzakaganhurirwa dzevanhu, kuti ndive mudziyo wekuti tsitsi dzenyu dzamwari dziwire pachikara ichi.
Kuti kuburikidza nemafuta angu akakosha ndinogona kukuputira mumhepo ine simba rinosimbisa, kuitira kuti kutambudzika kwako kudonhe uye hutano hwako hudzorerwe.
Izvi ngazviitwe mukuda kwako, pamwe nekudzivirirwa kwemweya yakanaka inondikomba. Ameni!
Pet Kudzivirira Munamato
“Kuna ivo Mwari vane tsitsi Mwari, vakasika zvisikwa zvese zvinogara mupasi, kuti vagone kurarama mukuwirirana nevanhu, uye neAnge Guardian Mutumwa, anochengetedza mhuka dzose dzinogara neni mumba muno.
Ini nekuzvininipisa ndinokumbira kuti utarise zvisikwa izvi zvisina mhosva, unzvenga zvakaipa zvavo zvese uye uchivatendera kuti vagare zvakachengeteka uye nerunyararo kuti vakwanise kukuzadza nemufaro uye nekuda mazuva angu ese.
Dai kurota kwako kuve nerunyararo uye dai mweya wako unditungamire kumatunhu erunako nerunyararo muhupenyu huno hwatinogovana.
Munamato wekuporesa mhuka
«Archangel Ariel, uyo akapiwa naMwari chipo chekuchengeta mhuka dzese,
Ngirozi huru Raphael, uyo akagamuchira chipo cheumwari chekuporesa, ndinokukumbira kuti uvhenekere panguva ino hupenyu hweichi chinhu chinotapira (taura zita remhuka).
Dai ngoni dzaMwari dzidzore hutano hwake, kuti agone kundipawo mufaro wekuvapo kwake nekuzvipira kwerudo rwake.
Nditenderei, kuburikidza nemaoko angu uye nemafungiro angu mashoma emunhu, kuve mudziyo werudo rwaMwari kuti akuputirei mumhepo inosimbisa simba, kuti kutambudzika kwako kunopera uye hutano hwako huvandudzike.
Izvi ngazviitwe mukuda kwako, pamwe nekudzivirirwa kwemweya yakanaka yakandikomberedza. Ameni.
Kunyengeterera imbwa inorwara inoporesa
Baba Vekudenga, hukama hwedu hwevanhu kushamwari dzedu kubva kune mamwe marudzi chipo chinoshamisa uye chakakosha kubva kwamuri. Iye zvino ndinokukumbira kuti ubvumire mhuka dzedu kuchengetedza kwakakosha kwevabereki uye simba rekuporesa kubvisa chero kutambura kwavangave nako. Tipe isu, shamwari dzako dzevanhu, nzwisiso nyowani yemitoro yedu kune izvi zvisikwa zvako.
Ivo vanovimba nesu sekuvimba kwedu; Mweya yedu uye yavo vari pamwechete pasi pano kugadzira hushamwari, chidakadaka uye chidakadaka. Tora minamato yedu yemwoyo wose uye zadza yako anorwara kana anotambura mhuka nechiedza uye nesimba kukurira chero kupora kushaya simba mumuviri. Changamire, ini ndinonyatsotaura izvo zvamunoda (taura zita remhuka yacho).
Runako rwake rwakabatana nezvisikwa zvese uye nenyasha dzake dzinoyerera kune zvisikwa zvake zvese. Zvemweya yedu masimba akanaka, achibata mumwe nemumwe wedu nekuratidzwa kwerudo rwavo.
Ipa shamwari dzangu mhuka uye refu uye hutano hupenyu hunokosha. Vape hukama hwakanaka nesu, uye kana Ishe vafunga kuvabvisa kubva kwatiri, zvinotibatsira kunzwisisa kuti havasisiri nesu, asi vanouya chete kunaIshe. Tipeiwo munamato wedu wekureverera kweiyo Nyasha Francis weAssisi, akakurumbidzai muzvisikwa zvese. Mupe simba rekutarisa shamwari dzemhuka kusvikira vachengeteka naIshe mukusingaperi, kwatinotarisira kuti rimwe zuva kuzobatana navo zvachose. Ameni.
Munamato weSanta Francis weAssisi wemhuka dzinorwara.
"Anobwinya San Francisco, Chiyera chakareruka, rudo uye mufaro.
Kudenga iwe unofungisisa nezvisingaperi zvaMwari.
Tibetsere isu mune zvemweya nezvido zvemuviri.
Namata kuna Baba vedu uye Musiki kuti vatipe mafaro atinokumbira kureverera kwenyu, imi, imi magara mune shamwari yake.
Uye vhenekera moyo yedu yekukura rudo kuna Mwari uye nehama, kunyanya avo vanonyanya kudiwa.
Mudiwa wangu San Chiquinho, isa maoko ako kungirozi iyi (taura zita remhuka) inoda iwe! Kuziva rudo rwako, teerera chikumbiro chedu.
Mutsvene Francis weAssisi, tinamatirei. Ameni
Zvino zvauri kuziva munamato wembwa dzinorwara, dzidzawo minamato ine simba yemhuka dzinorwara.